Andraikitra Lehibe ny Manara-dia An’i Jesosy | Fiainan’i Jesosy
Andraikitra Lehibe ny Manara-dia An’i Jesosy
INONA NO TSY MAINTSY AFOY MBA HO MPIANATR’I KRISTY?
Nampita lesona lehibe i Jesosy, tamin’izy nisakafo tao an-tranon’ny lehiben’ny Fariseo. Nanohy ny diany nankany Jerosalema izy avy eo, ary nisy vahoaka be nanaraka azy. Nahoana? Tena te ho mpanara-dia azy ve izy ireo, na inona na inona nety ho notakina taminy?
Nety ho nanafintohina ny sasany taminy ny tenin’i Jesosy teny an-dalana hoe: “Raha misy manatona ahy nefa tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny ary ny anabaviny, eny fa na dia ny ainy mihitsy aza, dia tsy afaka ny ho mpianatro izy.” (Lioka 14:26) Inona no dikan’izany?
Tsy te hilaza i Jesosy hoe tsy maintsy mankahala ara-bakiteny ny havany ny mpanara-dia azy. Midika kosa ilay hoe mankahala fa tokony ho latsaka kokoa noho ny fitiavana an’i Jesosy ny fitiavana azy ireo. Tsy tokony hanahaka an’ilay lehilahy tao amin’ny fanoharana momba ny sakafo hariva izy ireo. Tsy nanaiky fanasana lehibe iray izy io satria vao nampaka-bady. (Lioka 14:20) Voalaza fa ‘nankahala’ an’i Lea i Jakoba razamben’ny Jiosy ary tia an’i Rahely. (Genesisy 29:31) Midika izany fa latsaka kokoa noho ny fitiavany an’i Rahely ny fitiavany an’i Lea rahavaviny.
Mariho fa nilaza i Jesosy hoe tokony hankahalain’ny mpianany ‘na dia ny ainy aza.’ Midika izany fa tokony ho tia an’i Jesosy mihoatra noho ny itiavany ny ainy ny tena mpianany, ka ho vonona hamoy ny ainy mihitsy raha ilaina. Andraikitra lehibe àry ny hoe mpianatr’i Kristy. Ilaina ny mandinika tsara vao mifidy ny hanao izany.
Mety hiatrika olana sy henjehina ny mpianatr’i Jesosy. Hoy mantsy izy: “Izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy afaka ny ho mpianatro.” (Lioka 14:27) Tokony ho vonona ny halam-baraka toa an’i Jesosy àry ny tena mpianany. Nilaza mihitsy aza izy fa hamono azy ho faty ny fahavalony.
Nila nieritreritra tsara ny dikan’ny hoe mpianatr’i Kristy àry ilay vahoaka niara-dia taminy. Nilaza izao fanoharana izao izy mba hanasongadinana an’izany: “Iza aminareo, ohatra, no te hanorina tilikambo nefa tsy mipetraka aloha manao kajy ny amin’izay ho lany, mba hahitana raha manana ny ampy hamitana azy izy, na tsia? Raha tsy manao izany izy, dia mety hametraka ny fototra nefa tsy ho afaka hamita an’ilay tilikambo.” (Lioka 14:28, 29) Raha te ho lasa mpanara-dia an’i Jesosy àry ilay vahoaka, dia tokony ho efa tena tapa-kevitra ny hanatanteraka tsara an’ilay andraikitra. Te hanasongadina izany izy ka nilaza fanoharana iray:
“Mpanjaka iza no handeha hiady amin’ny mpanjaka hafa, ka tsy mipetraka aloha maka hevitra, raha ho vitany na tsia, ny hifanandrina amin’ilay manana miaramila roa alina nefa ny azy iray alina monja? Raha tsy ho afaka hifanandrina aminy izy, dia haniraka ambasadaoro hanao raharaham-pihavanana, dieny mbola lavitra ilay anankiray.” Hoy i Jesosy nanamafy izany: “Koa tsy afaka ny ho mpianatro tokoa izay tsy mahafoy ny fananany rehetra.”—Lioka 14:31-33.
Mazava ho azy fa tsy ilay vahoaka niara-dia taminy ihany no tiany hilazana an’izany. Tsy maintsy vonona hankatò an’ireo teniny ireo izay rehetra te hanara-dia azy. Midika izany fa izay te ho mpianatr’i Kristy, dia tokony ho vonona hamoy ny zava-drehetra. Mety ho ny fananany izany na ny ainy mihitsy. Ilaina ny misaintsaina sy mivavaka momba izany.
Nilaza i Jesosy avy eo fa ny mpianany no “siran’ny tany.” (Matio 5:13) Efa niresaka an’izany izy tamin’ilay Toriteny teo An-tendrombohitra. Miaro ny sakafo tsy ho simba ny sira. Nety ho te hilaza àry i Jesosy fa miaro ny olona ny mpianany, satria manampy azy ireo hifandray tsara amin’Andriamanitra sy tsy ho ratsy fitondran-tena. Efa nadiva hifarana ny fanompoan’i Jesosy, ka hoy izy: “Tsara tokoa ny sira, kanefa raha ny sira indray no lasa matsatso, inona no hatao aminy mba hiverenan’ny tsirony?” (Lioka 14:34) Fantatry ny mpihaino azy fa naloto ny sira sasany tamin’izany, satria nifangaro zavatra misy tany ka zara raha azo nampiasaina.
Tian’i Jesosy haseho àry fa tsy tokony hamela ny zotom-pony hihena na dia ireo mpianany efa ela aza. Tsy ho azo ampiasaina toy ny sira lasa matsatso izy ireo raha mitranga izany. Mety hesoin’ity tontolo ity izy ireo amin’izay. Mbola ratsy noho izany aza, fa tsy ho mendrika eo anatrehan’Andriamanitra izy ireo, ka hanala baraka ny anarany. Nantitranterin’i Jesosy fa ilaina ny manalavitra an’izany, ka hoy izy: “Izay manan-tsofina hoenti-mihaino, aoka izy hihaino.”—Lioka 14:35.
Inona no dikan’ilay tenin’i Jesosy hoe tsy maintsy “mankahala” ny havany sy ny “ainy” ny mpianany?
Inona no lesona tian’i Jesosy hampitaina tamin’ilay fanoharana momba ny fanorenana tilikambo sy ilay momba ny mpanjaka sy ny tafiny?
Inona no tian’i Jesosy holazaina rehefa niresaka momba ny sira izy?
Hizara Hizara Andraikitra Lehibe ny Manara-dia An’i Jesosy